- जिल्ला बसेर संगठनको काम गरेका सभापतिहरु पार्टी बलियो हुँदा खुशी हुन्छन्ः सभापति श्रेष्ठ
जिल्ला बसेर संगठनको काम गरेका सभापतिहरु पार्टी बलियो हुँदा खुशी हुन्छन्ः सभापति श्रेष्ठ
नेपाली कांग्रेस गुल्मीका पार्टी सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले पछिल्लो समय निकै सक्रिय भएर पार्टी सञ्चालन गरेका छन् । गुल्मीमा कांग्रेसका गतिविधि, विकास निमार्णको क्षेत्रमा खेलेको भूमिका, संगठन र यसका गतिविधिलाई सक्षम र पारदर्शी तवरले अगाडि बढाउँदै समग्र गुल्मी कांग्रेसलाई गति दिन सफल जुझारु तथा स्पष्ट वक्ता श्रेष्ठसँग हामीले देशको वर्तमान अवस्था, नेपाली कांग्रेसको भूमिका, गुल्मी कांग्रेसका गतिविधिलाई लिएर नेपालतारा डटकमका लागि सुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली कांग्रेसको स्थापना राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक र समाजवाद मूल उद्देश्यका साथ भएको हो ।
। लोकतन्त्रबिना मुलुक रहँदैन भन्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको भनाइमा अहिले बहस हुन लागेको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको सरकार नै जब अधिनायकवादतिर उन्मुख हुन्छ, त्यो बेला लोकतन्त्र खतरामा पर्दछ । वर्तमान समय पनि त्यस्तै बन्न लागेको आभाष भएको छ । नेपाली कांग्रेसले सदनबाट अहिले देशमा भइरहेका कृयाकलापका सम्बन्धमा सशक्त आवाज उठाइरहेको छ । हत्या, हिंसा, बलात्कार र भ्रष्टाचारकाविरुद्ध आवाज उठाइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा पनि दह्रो आवाज उठाएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएको सरकारले सोही प्रकृया अनुसार नै जनमुखी सरकार चलाओस् भन्ने कांग्रेसको धारणा हो । २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसले पनि दुई तिहाइको सरकार चलाएको थियो । त्यतिबेलाको नेपाली कांग्रेसको सरकारले आफ्नो एक–डेढ वर्षे कार्यकालमा जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा रहेर आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण, राजा रजौटाको उन्मूलन र गाँउ–गाँउमा लोकतान्त्रिक पद्धतिहको प्रकृया थालनी गरेको थियो । एक सामान्य कार्यकर्ताले जसरी प्रतिपक्षसित गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीले नै सरकारको हैसियत तय गरेको छ । हिजो १९ दिनको जनआन्दोलनले २३० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भयो । अहिलेका केपी ओलीसँग राजाको भन्दा ठूलो दम्भ छ । यो दम्भलाई अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस कमजोर भएको छैन ।
जिल्ला सभापतिको हिसाबले कांग्रेस कमजोर छैन भन्नु स्वाभाविक हो तर आमजनताले हेर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले कांग्रेस कमजोर देखिएको छ होइन र ?
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पक्ष–विपक्ष रहन्छन्, यो स्वाभाविक हो । नेपाली कांग्रेस एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । प्रजातान्त्रिक पद्धतिकै प्रकृयामा छलफल हुन्छ । छलफल हुँदै गर्दा कसैलाई केही कुरा चित्त नबुझ्न पनि सक्छ । यो पक्ष–विपक्षको संवादलाई गुट–उपगुटको रुपमा लिन हुँदैन । एउटै घरका मानिसको तरकारी खाने इच्छा पनि फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पनि छलफल र बहस रहन्छ र हामी एउटा निर्णयमा पुगिन्छ । बैठकमा भएका सहमति र असहमतिलाई गुट उपगुटको रुपमा कसैले पनि लिनुहुँदैन । सभापतिहरु एकैठाउँमा बसेर छलफल गर्न पाउँछन् । जिल्ला पार्टी सभापतिहरुको चाहना नै पार्टी बलियो बनाउने हुन्छ । जिल्लामा बसेर काम गर्ने सभापतिमा पार्टीको माया अतुलनीय हुन्छ । जिल्ला बसेर संगठनको काम गरेका सभापतिहरु पार्टी बलियो बन्दा अत्यन्त खुशी हुन्छन् ।
नेपाली कांग्रेस गुल्मीले आयोजना गरेको कार्यक्रमको प्रभावकारिता कस्तो देखिएको छ ?
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस गुल्मीले विभिन्न कार्यक्रमहरु लिएर जनतामाझ गैरहेको छ । नेपाली कांग्ेस गुल्मीले आयोजना गरेको अग्लुङ अर्बेनी जागरण कार्यक्रम, प्रथम चरणको नेपाली कांग्रेसको जनजागरण अभियान, दलित जागरण अभियान , गाउँमा जाउँ गाउँमै रमाउँ कार्यक्रम लगायतका धेरै कार्यक्रम नेपाली कांग्रेस गुल्मीले सम्पन्न गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले निर्देशन गरेका जागरण अभियानका कार्यक्रमहरुलाई पनि गुल्मी कांग्रेसले अत्यन्त उत्साहपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गरेको छ । अहिले पनि हामीले प्रत्येक गाउँ टोलमा नेपाली कांग्रेसको प्रशिक्षण र पुनर्मिलन कार्यक्रम गरेको छ । दोस्रो चरणको जागरण अभियान भदौ २४ गते बिपी जयन्तीका दिन प्रारम्भ भएर असोज ७ गते समापन हुँदैछ । हामी त्यस कार्यक्रमको निम्ति पनि आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं ।
गुल्मीमा नेपाली कांग्रेसका गतिविधिहरु कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् ?
गुल्मीमा १३ औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसको संगठनमा सक्रियता देखिएको छ । नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक भएर आएको कारणले हामी हामी निर्वाचनमा भने पराजित भएका छौं । नेपाल तरुण दल, नेविसंघ, नेपाल महिला संघ लगायत सबै पार्टीका भ्रातृ संगठन र शुभेच्छुक संगठनहरुमा अत्यन्त शालीनताका साथ हामीले १२ वटै स्थानीय निकायहरुमा सांगठनिक अभियान सुरु गरेका छौं । हामीले नेपाली कांग्रेस गुल्मीमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार नीतिगत र संस्थागत रुपमा अघि आएको छ । गुल्मी कांग्रेसले उक्त भ्रष्टाचारको बिरोध गरिरहेको छ । इस्मामा भएका भ्रष्टाचारजन्य काममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । इस्मा, मुसिकोट नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्न कांग्रेस तयार भएको छ । मुसिकोट कांग्रेसले गुल्मीमा भएका आर्थिक अनियमितताका विरुद्धमा निरन्तर स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुसित आफ्नो कुरा राखिरहेको छ । भ्रष्टाचार भएका र देखिएका आयोजनाहरुमा नेपाली कांग्रेसले संस्थागतरुपमै विरोध गरेको छ । हिजो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अहिले आउँदा गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार जस्तो भान भएको छ । हिजो माथिल्लो तहमा देखिएको भ्रष्टाचार अहिले स्थानीय तहमा देखिएको छ । गुल्मी कांग्रेसले अब स्थानीय सरकारका यस्ता अवाञ्छित गतिविधिको कडा रुपमाले प्रतिकार गर्दैछ ।